ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ တာလီဘန်အင်အားစုက ခေါင်းဆောင်သစ်တယောက် ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပြီလို့ တာလီဘန်စစ်သွေးကြွတွေက ပြောပါတယ်။
၀က်တုပ်ကွေးအတွက် ပြင်ဆင်ကြဖို့ ကုလသမဂ္ဂ သတိပေး
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် `အပြောင်းအလဲအတွက် အခွင့်အလမ်း´ ဟု ICG ပြော
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ကျယ်ပြန့်စွာ ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ ရှိနေသော်လည်း ယင်းသည် `အပြောင်းအလဲအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေ´ တရပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထို့ကြောင့်လည်း အစိုးရ၊ ...
ချေးငွေ တဝက် ပြန်ဆပ်ရန် ဆားလုပ်ငန်းရှင်များကို နှိုးဆော်
နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာမြို့နယ်ရှိ ဆားလုပ်ငန်းရှင်များကို အစိုးရချေးငွေ၏ ထက်ဝက်ကို ယခုလအတွင်း ပြန်ဆပ်ကြရန် နှိုးဆော်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ...
ရာဇဝတ်မှုများ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် ကင်ပိန်းလှုပ်ရှားသူများ တောင်းဆို
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အထူးသဖြင့် ကုလ လုံခြုံရေး ကောင်စီအနေဖြင့် စစ်အစိုးရ ကျူးလွန်ခဲ့သော စစ်ရာဇဝတ်မှုများ၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သော ရာဇဝတ်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေး ......
မလေးရှားမှာ တရက်အတွင်း လူ ၅၇၀ နီးပါး A (H1N1) ကူးစက်ခံရ
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ တနိုင်ငံဖြစ်သည့် မလေးရှားတွင် ယမန်နေ့ တရက်ထဲ၌ပင် လူတုပ်ကွေး ကပ်ရောဂါ A (H1N1) ကူးစက်ခံရသူ ၅၆၉ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံ ကျန်းမာရေး...
“ဆေးစက်ကျရာ ကပြသူတွေနဲ့ ဆေးစက်ချသူများ”
ညနေပိုင်းမှာ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ သတင်းတပုဒ် ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါက ဂျွန်ဝီလျံ ယက်တောကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ သတင်းပါ။ အချိန်တခုအတွင်း ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့...
ဆူနာမီသတိပေးချက် အစမ်းလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်
ထိုင်းနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဌာနနှင့် မြေငလျင်တိုင်းထွာရေးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ ဆူနာမီသတိပေးချက် အစမ်းလေ့ကျင့်မှုကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲမှ ၁၁...
မြတ်သော ယုံကြည်ချက်အတွက် (အရှင်ဂမ္ဘီရသို့ အမှတ်တရ)
"ကျုပ်ဘက်ကတော့ အားလုံးကို အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အပြင်မှာရှိနေကြတဲ့ ဒကာတော်ကြီးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ်ကျေပွန်ဘို့ လိုတယ်" အမတော်နှင့် တဆင့်ပါးလိုက်သည့်...
Cartoon Maung Yit - Non-Burmese were more interested in 2010 Burmese Junta's Election than real Burmese !!!!
ဒေၞအောင်ဆန်းစုကြည်ကို မိသားစုဆရာဝန်နဲႛ တွေႛခွင့်မပေးသေး
ဒီကေဘီအေနဲႛ ကေအန်ယူ ပြန်လည်ပူးပေၝင်းဖိုႛ အလားအလာရှိ
Posted by saffrontoward at 11:38 AM
ဧည့်သည်တွေ့ဆုံခွင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှင်းလင်းချ...
ပြည်တွင်းမှ ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက်များ
ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်၏ သြဂုတ်လ အစီရင်ခံစာ